Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2016
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Avrily, 2016
Amerika Avaratra 30 Avrily 2016
Raha mbola ao anatin'ny krizy ara-bola i Pôrtô Riko , ny fahombiazan'ilay teatra an'i Lin-Manuel Miranda kosa nitondra hafaliana sy fanantenana.
Manomboka Amin'ny Mampahery Ka Hatramin'ny Mahatsikaiky, Zavatra 6 Izay Zarain'ny Olona Amin'ny Mediam-bahoaka Momba An'i Iràna Sy Ny Zavakanto Ary Ny Kolontsaina Persiana
"...ankehitriny miady amin'ireo izay te-hisintona an'i Iràna ho any amin'ny fihemorana aho. Amin'ny fanantenana ho an'ny andro izay hahatonga anay rehetra... afaka mifandefitra bebe kokoa."
Indro ny Sarintany Mampiseho Izay Tena Sainin'ny Japoney Amin'i Eoropa
Azia Atsinanana 28 Avrily 2016
Araka ny fitsarana an-tendrony Japoney, izay ny firenena manana fonja mamirapiratra indrindra? Ary iza ny firenena ao Eoropa feno olona adala indrindra? Ary nahoana ny Letoniana no mihinana ovy?
Lolofotsy Avy Any Nepal Mizara Hafatra Fanantenana Sy Fiovàna Sosialy Manerana Ny Tany
Azia Atsimo 24 Avrily 2016
Matetika dia ireo mpanamory ara-barotra no miteny hoe , "Misaotra anao niaraka nisidina taminay." Fa na rahoviana na rahoviana aho no mifanena amin'izy ireny, izaho no miteny, "Misaotra anao niaraka nisidina tamiko!"
Ny Lamaody Zeorziana: Ny Zavatra Goavana Manaraka Ve ?
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Avrily 2016
Fantatr'ireo mpamokatra lamaody fotsiny tamin'ny hoe Avtandil, tsy niala ny tanindrazany mihitsy i Tskvitinidze, 42 taona, ary tsy mbola manana faniriana hanao izany. “Efa tototra i Eoropa sy Etazonia,”
Amerika Latina 17 Avrily 2016
Raha hita sary ao amin'ny boky taridalan'ny fitetezan-tany iraisampirenena ny sary nataon-tanana an-drindrina ao afovoan-tanàna, dia tsy fantatry ny maro, eny fa na izay monina amin'ity tanàna lehibe indrindra ao Amerika Latinina ity kosa, ireo sary nataon-tanana an-drindrina miranty eny amin'ny sisintsisin'ny tanàna.
Lehilahy Safiotra Vietmaniana-Amerikana Mitondra Ny Niainan'ireo Mpifindramonina Ao Etazonia Ho Anaty Tononkalo
Amerika Avaratra 17 Avrily 2016
Ao anatin'ny fitambaran'ny tononkalony voalohany "Night Sky with Exit Wounds" (Lanitry ny Alina sy Ratram-Pilefàna) , resahan'i Ocean Vuong, valo ambiroapolo taona, ny zavatra niainany avy any Vietnam ho any Etazonia
Posiposy Maroloko Anoherana ny Herisetra Mihatra Amin'ny Vehivavy Ao Bangladesh
Azia Atsimo 14 Avrily 2016
"Manantena izahay fa hitety toerana maro ny teny, ary hahita ny làlany ho any anatin'ny fihevitry ny olona, ary mitarika antsika ho any amin'ny ampitso tsaratsara kokoa."
Azia Atsinanana 13 Avrily 2016
Haj Agha No iantsoan-dry Zareo Ahy — Filalaovana Ny Revolisiona Iraniàna
Iràna 11 Avrily 2016
Tantarain'ilay mpamorona lalao, Navid Khonsar, ao anaty lalao iray ny Revolisiona 1979 tao Iràna . "Ny famoronana lalao tahaka izao dia manome vintana hanolorana ny tantara tsy ho toy ny mainty sy fotsy ihany, fa mba asiana larony. "